WMA Player u Android: Sida loo Play WMA kasta oo ku Android Qalabka Si fudud
> Resource > Video > Sida loo Play WMA kasta oo ku Android Qalabka Si fudud
Ha ku dhumin waqti ku helo ciyaaryahan weyn WMA u Android inay ku ciyaaraan files WMA qalabka Android aad. Ilaa hadda sida waan ogahay, waxaa jira dhowr ka mid ah WMA ciyaaryahanka in had iyo jeer stably shaqayn karo Android oo ha idin ​​ciyaari file kasta oo WMA ay ka mid yihiin ilaaliyo files WMA. A 'welwel la'aan ah' xal waa in loogu badalo WMA in Android qaabab socon, si aad u ciyaari kara wax WMA (DRM iyo files aan DRM WMA on Android labadaba) files on kiniin Android ama Android phone. Ha ka walwalin waxa aad qaadan doonta waqti badan. Qalab smart waxaan soo bandhigo in qodobkan uu awood weyn si loogu badalo ka mid ah ama badan WMA files leh 30X xawaaraha diinta. Waxaa magaceeda la Wondershare Video Converter .
Marka la barbar dhigo ciyaaryahan WMA u Android ah, taas WMA fiican in Converter Android stably oo wax ku ool ah weligood ka shaqeeya, ugu muhiimsan, awood u aad u ciyaaro DRM WAM ilaaliyo on qalabka Android ay diinta. Waxaa loola jeedaa in aad dareemi kartaa si xor ah u ciyaaro WMA wax ku Android. Marka ay timaado in ay Mac version- Video Converter u Mac , waxay u bedeli karaan oo keliya WMA galmo ah ee Android. Laakiin hawlaha iyo xafladaha kale ay la mid yihiin kuwa in version Windows ah.
Maqaalka halkan inta badan kugu hagi doona habka on boosteejo Windows.
1 Load files WMA
Si aad u dajiyaan files WMA si aad u app, waayo, diinta, howlgalka jiitaa-iyo-hoos loo ogol yahay. Alternativley, waxaad riixi kartaa batoonka Add Files ee geeska bidix ee kore ee suuqa si dhirtuba your computer ka dibna dooran files WMA aad rabto in aad keeno.
MP3 waxaa si balaadhan oo ay taageerayaan qalabka Android. Sidaas halkan, waxaad dooran kartaa MP3 format sida wax soo saarka. Waxaa jira ikhtiyaar kale oo aad dooran kartaa. App Tani si toos ah waxay bixisaa presetting ah ugu wanaagsan ee qalabka Android ugu. Sidaas, waxa kale oo aad dooran kartaa horena sida aad model Android.
Si aad u dooran MP3, waxaad uun ku dhuftay image qaabka on Murayaad Qaabka Output ugu horeysay, ka dibna si qaab> Audio> MP3. Si aad u doorato qaabka filaayo in qalab Android aad, waxaad tagi kartaa Device halkii Qaabka. Markaas, waxaad uun doorato qalabka Android walba aad dooneyso.
3 Play WMA on Android
Tag koonaha midig ee suuqa kala barnaamijkan, oo waxaad halkaas riix badhanka loogu badalo ka. Wakhtigan, app this bilaaban doono diinta WMA aallada Android aad. Inta lagu guda jiro qaab beddelidda, ilaalinta DRM haddii uu hadda jira waxaa si otomaatik ah saari karo. Ka dib markii ay diinta ka, kaliya ka dhacay Open Folder si ay u helaan, kuwaas oo la gediyay files audio, oo markaas iyaga wareejiyo qalabka Android aad u loo maqli karo. Waa intaas.